Olan’ny fisotroan-dronono any Frantsa Miantso fitokonana faobe ny sendikalista anio
Ny sabotsy 28 martsa izao dia nampandre ny praiminisitra Edouard Phillipe fa hampihatra ny and. faha-49 andl faha-3 ao anatin`ny lalàmpanorenana mba hahafahana mandany ilay lalàna momba ny fanavaozana ny fisotroan-dronono any Frantsa.
Ity andinin-dalàna ity dia manome vahana ny mpitondra mandany lalàna iray tsy mandala tsangan-tanana eny anivon`ny Antenimiera. Namoaka fanambarana iombonana ireo sendikalista avy amin`ny CGT, FO, CFE-CGC, la FSU et Solidaires, ny vondron`ny mpianatry ny lisea (Fidl), MNL, UNL ary ny mpianatry ny Unef. Raha ny votoatin`ny fanambarana dia milaza fa tsy mahafehy ny tetikasa ny fitondram-panjakana taorian`ny fandalovana teo anivon`ny Antenimiera matoa hiroso amin`ny fampiharana io andinin-dalàna io 49.3 io. Tsapa fa banga sy mandeha ila io volavolan-dalàna io ary voaporofo fa mikasa hanao tery vay manta ny governemanta frantsay, hoy hatrany ny fanambarana. Miantso fitokonana faobe indray ireo sendikalista anio entina hanoherana io volavolan-dalàna mikasika ny fisotroan-dronono.